खुला चिठी म्याग्दी कांग्रेसलाई … | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home विविध खुला चिठी म्याग्दी कांग्रेसलाई …
विनय श्रेष्ठ\_म्याग्दी- बेनी-७
२०७८, ९ मंसिर बिहीबार १५:२१
(विनय श्रेष्ठ) एक जना मनिस कम्प्युटर सिक्न गएछ । प्रशिक्षकले भनेछ – जान्दै नजानेकाेलाई पाँच हजार र अलि अलि जानेकाेलाई दस हजार । म्याग्दी कांग्रेसकाे साताैं जिल्ला सम्मेलन भर्खर सम्पन्न भएकाे छ । मंसिर १ गते लागेकाे चन्द्र ग्रहणले मंसिर ४ गते बल्ल तल्ल छाेड्याे म्याग्दी कांगेसीजनलाई । कतिपय पदहरु निर्विरोध भए भने कतिपय निर्वाचनबाट छिनाेफानाे भए । उद्घाटन सत्र भरि सहमतिको सुगा रटाई गरेका नेतागण मतदातालाई भाेटिङ प्रक्रियामा सहभागी बनाई चिसाे ताताे पिलाएर छाेडे ।
चुनाव भए पछि स्वभाविक अस्वभाविक नतिजा आउनु आश्चर्यजनक थिएन नै । चुनावको नतिजा हेर्दा लाग्याे-अब म्याग्दी कांग्रेस पाकाे हुदैछ । लामाे समयकाे प्रतिपक्षसंगकाे पराजयलाई जितमा बदल्न चाहन्छ । उस्ले बुझेकाे छ समाजमा सरस्वतीकाे भन्दा लक्ष्मपुजा भव्य हुन्छ । त्यसैले सिद्धान्तनिष्ट कांग्रेस हाेईन आँखा चिम्लेर हरियाे रुखमा कालाे स्वस्तिक लगाउने कांग्रेसी चाहिन्छ । म्याग्दीमा जसरी भए पनि चारताराकाे खम्बा गाड्नु छ ।
नामकाे अगाडि जसरी भएपनि मा. लेख्नुछ । यद्यपि मा. काे पूरा रुप प्रसंग अनुसार फरक हुनसक्छ । त्यसकाे लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार देखिन्छन् । हिजाे कहिले हसिया हथौड़ामा त कहिले गाइमा स्वस्तिक छाप लगाउन लगाई बिटुलाे बनाउदा पनि हात लाग्न नसकेकाे माननियकाे पगरी गुथ्न वीचमा आउने बाधा अड्चनलाई पन्छाउने र सहिद बनाउन पनि तयार छन् ।
त्यसैले त रथ हाक्ने कृष्ण पछारिए ।क्याप्टेनहरुलाई बिचैमा अलपत्र पारेर युद्द लड्न निस्किए । यसै बीच एउटा हेक्का राख्नु पर्ने कुरा के रहन्छ भने बहुमत सधै उत्कृष्ट रहदैन । पहाडहरू धेरै भएपनि एक्लाे सगरमाथा सर्वाेच्च शिखर हाे । वनमारा झारकाे बहुमत हुदैमा सति साल भन्दा राम्रो कदापि हुदैन ।
दस टाउके रावण भन्दा एक टाउके राम भगवानकाे रुपमा पुजिन्छन् । १०० भाइ काैरवलाई ५ भाइ पाण्डवले जितेकै हुन । तरपनि म्याग्दी कांग्रेसले के अनुभव बटुलेकाे छ भने निष्ठावान र सरलताले जित्ने भए गाेपाल नारायण भट्टचनले जित्न पर्थ्याे । बाैद्दिकताले जित्ने भए डाक्टर भुपेन्द्र बहादुर खड्काले जित्न पर्थ्याे । त्यसैले चुनाव जित्न क्षमता, सक्षमता र याेगदान हाेईन मत पत्रमा मत चाहिन्छ । ईतिहास बताएर नेतृत्व लिने दिन गए ।
ईतिहास काेट्याउने र पढ्ने पढाउने फुर्सद कसैलाई छैन । सहिद भिम बहादुर घिमिरेको वलिदान सम्झने र सम्मान गर्ने कांग्रेस कामै छैन । शहिदका सन्तति काजीहरु लखेटिन्छन्, हराईन्छन् ।शेरबहादुर शेरचन देखि याेगेन्द्रबहादुर खत्रीसम्म म्याग्दी कांग्रेसका चम्किला ताराहरुकाे याेगदान सम्झन म्याग्दी कांग्रेसलाई नत मतलव छ नत याेगदान लिपिबद्द गर्नेकाे उच्च कदर नै । अब निष्ठावान कांग्रसी नेता कार्यकर्ता त तिम्राे माया ९९ मेराे माया सय भन्दै सम्झने – पानी छम्कने ।
किनकि माननीय हुने भुत सवार हुदा आदरणीय र सम्मानितहरू पाखा लगाईदैछ । चारतारेकाे खम्बा गाड्नकाे लागि गम्भीर हुनेहरुकाे मन चुडिदै छ । तापनि म्याग्दी कांग्रेसले बुझेकाे छ – अलिकति कम्युटर जानेका भन्दा जान्दै नजानेकाेलाई सिकाउन सजिलाे भई झै मत पत्रमा लगाम लगाएकाे घाेडा झै, भदाैमा आँखा फुटेकाे गाेरु झै मतदाता चाहिएकाेछ , जसले दायाँबायाँ नहेरि झ्याप्प वुटामा भाेट ठाेक्दियाेस । वि. पि. काे हाेइन उम्मेदवारको फाेटाे चिनाेस् । तर पनि बुझ्न जरुरी छ- रावणकाे पराजयमा विभिषणकाे ठुलाे हात छ ।
काैरवले पाण्डवलाई सानाे राज्य नदिदा राज्य पनि गुम्याे , खानदान नै सखाप हुनु पर‍्‍याे । बलि राजा मार्न लगाउने आफ्नै सहाेदर भाइ सुग्रिप हुन । सुमेरु पर्वत घुम्ने कुमारलाई छाेडेर आफ्नो वरपर घुम्ने गणेशलाई जिताउन छाेड्नुहाेस् । त्यसैले अझ पनि केही बिग्रिएकाे छैन । समय बाकी छ । बेलैमा बुद्धि फिराेस् । आउदाे तीन तहकाे चुनावका फेरि सुर्य ग्रहण नलागाेस् । हसिया हथाैेडाले रुख नकाटाेस् । रुख काटेर हलाे बनाउन नपराेस् । रुख काटेर गाईलाई घाँस खुवाउन नपराेस् । शुभकामना !
Previous articleकांग्रेस सभापतिमा विमलेन्द्र निधिको उम्मेदवारी घोषणा
Next articleबेनी आसपासकै सडकमा भेटिन्छ चितुवा